Wax walba oo ay u Ogaato Android, shidin iyo PDF
Haddii aad rabto in aad isticmaasho si aad lacag soo celiyo canshuurta ama gunno dalacaad si aad u iibsato ah brand TV cusub, su'aasha dhabta ah waa nooca TV baad u socotaa si aad u hesho? A TV 3D? Wanaagsan! Ay u badan tahay in aad hore u leedahay Blu-Ray cajalladaha si uu u daawado, laakiin waxa haddii aad rabto in la abuuro filimada kuu gaar ah si aad u daawato aad set cusub? Waa dhab ahaantii fudud badan sidaad u malaynayso. Waxaad u baahan tahay laba shay - barnaamij lagu soo dejisan iyo filimada edit in, iyo TV 3D ah.
Waa maxay TV 3D ah si kasta?
A 3D TV waa HDTV gaar ah oo awood u muujinaysa images 3D marka la koob 3D iyo il sax ah sida ciyaaryahanka DVD ama xiriir computer loogu geeyo nool ama loo maqli karo ee lagala soo bixi videos aaday. Marka hab 3D aan karti, TV a 3D baahiyaa calaamadaha joogtada ah iyo filimada HD. Muraayadaha aad noqon kartaa dadban, taasoo la micno ah inaysan ku shaqeeya. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waa clip on style ama waa weyn oo ku filan in ay xirtaan badan sare ee muraayadaha. Muraayadaha 3D Active awood ayaa haysataan iyo u baahan doontaa inaad la synched mar kasta oo la telefishanka. Qaar badan oo ka la iman bateriyada, si ay lagu rakibaa karaa marka aan la isticmaalayn si ay diyaar u tahay inay u tagto marka ku xigta noqon.
Marka aad tagto dukaanka qalabka korontada si aad u hubiso ka soo telefishin 3D, qaado waqti aad eegto mid kasta. Oo iyagu way iman ee LCD, LED, iyo plasma; oo firfircoon iyo caajis. Mid kasta oo ka mid ah shaashadda noqon doonaa xoogaa kala duwan, iyo nuurka qolka beddeli doonaa sida aad u aragto. Waxaa jira qaar ka mid ah tirada screen ka si ay u doortaan, kuwaas oo qaarkood ku Waynaysaan leexo wax image iyo abuuro jeediya.
Soo qaado filimka aad jeceshahay in aad tijaabiso kasta la baxay Dhaluut, iyo ku qaataan ilaa iyo inta aad u baahan tahay ka hor inta uusan go'aan ka oo TV la guriga soo socda waan idin la sugaynaaye. Ha dareemin xun - aad samaynayso maalgashi, oo aad rabto in aad aad u hubiso sida maalgashiga in. Your iibiyuhu fahmi doonaa, maxaa yeelay, isagu ama iyadu ma aha in uu jeclaan marka qofka macaamilka ku faraxsaneyn iyo ilaa uu dhammaado laabtay unugga.
Sidaas waxa aad ka daawan kartaa on TV 3D ah?
Qaar badan oo ka mid ah filimada ee la heli karo waa daayo guriga filimada IMAX, laakiin waxaa jira talaabo oo animation filimada 3D laga heli karaa sidoo kale. Channels 3D yihiin kuwo aad u tiro yar oo kala fog, oo inta badan wax yar in ay jireen joogsadeen howlgal bilihii la soo dhaafay. Shirkadaha Cable iyo satellite mararka qaarkood waxay leeyihiin mowjado u gaar ah in ay wadaagaan markii la wadooyin kale oo ay, si aad u hesho qaar ka mid ah content iyada oo aad sanduuqa. Sidoo kale, qaar ka mid ah soo saarayaasha TV soo content taageerayo telefishin oo ay 3D, kaas oo aad ka heli karto by menu TV. Inta badan filimada ah, si kastaba ha ahaatee, aad ku socoto inuu doonayo inuu isaga kaayo dhigtid by diinta film ah ee hadda jira ama sixiddiisa aad footage u gaar ah si ay u abuuraan filim.
Sidoo kale waxaa jira kulan video 3D in laguu ogolaado in aad la kulmaan buuxa immersion-in ciyaarta. Baabuurta Race, ciyaaro kubada cagta, ama dagaalkaan dhex gelayaa - waa idinka ayay idiin taallaa. 3D video kulan waxaa laga heli karaa inta badan consoles'ka waaweyn ee ciyaarta.
Waxaad u soo bixi kartaa 3D videos ka YouTube, mahad Wondershare YouTube Video Downloader , barnaamij lacag la'aan ah oo kuu ogolaanaya in aad si aad u qabato ugu wanaagsan ee goobta leeyahay in ay bixiyaan in 3D iyo badbaadin for loo maqli shaashadda weyn. Halkaa marka ay marayso, waxaad kala soo bixi kartaa oo keliya ka YouTube, ama waxaad iibsan kartaa Wondershare Video Converter Ultimate iyo helitaanka content ka tiro ka mid ah goobaha, waxaa loogu badalo in ay 3D, oo ay ku riyaaqaan on your TV.
Geedi socodka ah ee lagala soo YouTube ma noqon karaan kuwo fudud. Just download Wondershare YouTube Downloader, iyo rakibi faylka .exe. Marka aad diyaar u tahay, abuurtaan barnaamijka.
Waxaad si fudud u soo bixi kartaa marka aad la furo YouTube in browser aad jeceshahay (Internet Explorer, Chrome, ama Firefox). Waxaa jiri doona button download a sare ee bogga waxaad riixi kartaa iyo video waxay bilaabi doonaan in ay soo bixi.
Waxa kale oo aad ka furan kartaa barnaamijka Downloader ah, paste URL ee video YouTube aad rabto in aad ka soo dejisan, iyo waxa ay sidoo kale bilaabi doonaan download ah. Image xigta idin tusiyo menu barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa baararka xaaladda idin tusin horumarka aad downloads.
Waxaa jira fursad ay si toos ah loogu badalo aad file in qaab kale haddii aad rabto. Just simbiriirixan bar ee xaq u sareysa si on oo si toos ah u samayn doonaan.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho website kale oo aan ahayn YouTube, aad qulquli karaan videos iyo gacanta u duubi karo waqtiga cayaarta. Burcad barnaamijka, iyo furi biraawsarkaaga in video aad rabto. Menu A muuqan doona shaashada loo maqli karo la button rikoor ah. Marka aad hesho si aad meesha ku video aad rabto in aad bilowdo duubo, record-saxaafadeed. Waxaad sameyn kartaa ah auto-maaweelin u duubay loo demiyo waqti cayiman ka dib, haddii aad rabto.
Way fududahay in la soo dir videos in qalab mobile aad network Wi-Fi guriga. Just rakibi Wondershare app on qalab aad iyo xirmaan. Waxaad u baahan doontaa in aad lambarka sirta QR ku dhammayn xiriir.
Marka files yihiin bixi, oo aad iyaga u bedeli karaan si 3D isticmaalaya Video Converter Ultimate . Fur barnaamijka Wondershare iyo dajiyaan faylasha. Waxaad isticmaali kartaa DVD ama videos on your computer drive ee adag. Inside barnaamijka Converter ah, riix dar faylasha iyo dejinta.
Bogga ugu weyn ka dib markii loading aad file, waxaad bedeli kartaa wax soo saarka iyada oo la isticmaalayo menu dhinaca gacanta midigta. Riix menu dumisid dooro qaab wax soo saarka aad rabto in aad ka.
Ugu salka uu xaq u leeyahay waa wheel ah ee soo socota si ay u Settings. Marka aad gujisid in, menu kula soo u oggolaan doonaa inaad sameyso qaar ka mid ah itusi degdeg ah si aad video, sida ay ula qabsadaan heerka jir ah iyo heerka video xoogaa ah.
Marka kasta oo kuu gaar ah oo ku saabsan video isha waa in aad ka jeelahay, riix batoonka badalo buluug hoose aad ka mid ah dhinaca midigta iyo barnaamijka samayn doonaa inta ka dhiman.
Haddii aad rabto in la abuuro DVD ah inuu u ciyaaro aad TV cusub 3D, waxaad samayn kartaa in si deg deg ah la isticmaalayo Wondershare. At sare ee bogga, button badhtamaha uu ka yahay Guba. Riix in uu u furo bogga software gubanaya. Waxaad ku dari kartaa videos gacanta ama guji iyo iyaga kaxayn galay qaybta ka shaqeeya. Dhinaca gacanta midig waa tiro ka mid ah foom oo aad ka dooran kartaa si aad u menu - oo ay ku jiraan fasaxyada, dhalashada, mashaariicda dugsiga, ama ma menu oo dhan.
Waxaad fursadaha hoose in aad kala dooran kartaa in aad ku darto image asalka ah iyo music.
Marka video xaqa ahu waa sida aad u rabto in aad, geliso DVD faaruq ee drive, oo guji OK hoose.
Waxaa gubi doonaa video ah in loo maqli karo DVD u sahlan oo la wadaago.
Haddii aad doonayso in aad qabato tafatir dheeraad ah ka hor inta aadan badalo faylka si 3D ama ku gubi in DVD, aad sameyn karto. Marka aad ku raran aad video, guji ay horyaalka ku screen ka dibna button Edit ah. Taasi dayn doonaa inaad ku darto saamaynta gaar ah, subtitles, iyo watermarks, ama sameeyo qaar ka mid ah itusi aasaasiga ah sida beerista ama qoqobada sawirada. Sida aad arki karto, mid kasta wuxuu leeyahay tab u gaar ah oo dhinaca gacanta midigta. Marka aad dhamaysid, riix Ok.
Waxaad ku milmaan kartaa laba (ama in ka badan) wada xereeyo, sidoo kale, by haysta hoos u wareejin halka aad riix video kasta in ay doortaan oo dhan kuwa aad rabto in aad la shaqeeyo. Marka aad diyaar u tahay, guji midowdo ku galay mid ka mid ikhtiyaar File iyo Viola! Your videos noqon doonaa mid.
Haddii aadan rabin in aad leedahay labo barnaamij, Video Converter Ultimate samayn kartaa YouTube downloads sidoo, oo lagu daray waxa ay leedahay awood ay ku soo bixi websites kale video.
Sida la YouTube Downloader, furo website bogga iyo raadiyo button Download in muuqan doonaa video in ay doortaan mid ka mid ah aad dooneyso in aad kala soo bixi ka. Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa URL ee website-ka dibna riix + ku dar button URL bidix ee sare ee bogga Download ku. Dhaji URL ka dibna riix OK.
Kabahaagu xaaladda aad ku tusi doonaa horumarka videos aad soo xulay in ay ka soo dejisan. Haddii aad u baahan tahay si ay u yara,, ka dibna aad dib u bilaabi kartaa download ka dib.
Sida aad arki karto, waa wax sahlan in la abuuro aad content gaar ah oo isticmaalaya nadiif ah, si sahlan loo isticmaali interface ka. Marka aad is bilaabay, aad doonaa shaki ku jirin in la abuuro badan oo ka kooban si ay u wadaagaan iyo ciyaaro aad TV cusub. Qaybta ugu fiican yahay - aad iyadoo goobaha ay ka ciyaari karaan oo ay leeyihiin xiiso leh oo iyaga la jira. Marka aad dhamaysid tafatirka iyo sameynta isbedelada la goobaha laga heli karo, markaas waa inaad ku gubi karaa in DVD. Dhanka kale, waxba ma aha si buuxda oo joogto ah oo aad samayn kartaa oo dhan isbedelka aad rabto, badbaadinta dhowr nooc oo kala duwan sida aad u tagto.
Ku raaxayso TV 3D cusub oo xiiso leh ee aad abuurayso qodob si ay u daawadaan ku yaal!
Sida loo badalo 2D in 3D la 3D Video Converter
> Resource > Download > Sida loo free download Movies 3D u 3D TV